Khubarada Maraykanku maxay ka yidhaaheen sababta Trump kursiga la ga ga adkaaday isu gu sii dhajinayo?
Tuesday 17th November 2020 11:51:09 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Dad badan oo Maraykan ah oo ku xeeldheer siyaasadda dalkooda ayay warbaahintu ka waraysatay
dhaqankan yaabka leh ee madaxweynaha la ga adkaaday, wax ayna xuseen dhawrkan qodob ee isu wada dhow ama isa saaran:
1. Trump ma aha nin qofnimo bisil ee waa caqli carruur ay ku adag tahay in uu aqbalo guuldarrada.
2. Isaga iyo kooxdiisii ololaha doorashadu wax ay rabaan in ay sidan tageerayaasha ka ga urursadaan lacag badan, lacagtaas oo ay ku gudayaan amaahdii ay doorashada ku galeen ama u adeegsan doonaan tartanka dambe oo Trump isu soo taago.
3. Wax uu rabaa in uu Joe Biden sidaa ka ga dhooqeeyo sharcinnimada, dadweynahana nacsiiyo, oo arrintu jiitanto oo dacwaddu dheeraato, si uu isagu u helo taageero siyaasadeed iyo dhaqaale.
4. In uu hannaanka doorashada Maraykanka gebigeedaba fadeexeeyo oo muran galiyo, una ekaysiiyo meel qudhuntay oo musuqmaasuq iyo xatooyo diloodeen, si dadka shaki iyo cabsiyi u galaan oo isaga loo gu soo jabo.
5. Waxaa raacsan taageerayaal xagjir ah oo fikir xun kuwaas oo macangagnimada ku dhiirrinaya, kuwaas oo u badan caddaanka dhaqanraaca ama midabtakoorka ah. Taageerayaashii badnaa ee uu dorraad Washington isu gu soo saaray wax uu ka dhiganayay shidaal iyo niyad uu ku sii wado eedaha iyo cabashada, isuna muujiyo in uu yahay dulmane la dhacay umadduna raacsan tahay.
Si walba, waxaa la wada qirayaa Maraykanku in uu marayo marxalad kalaguur iyo isbeddel weyn oo dhanka xun u socda. Tani wax ay lee dahay sababo dhaqaale, siyaasadeed iyo bulsheed oo is huwan. Dhaqan ahaan dalkaa waxaa ka talin jiray qolada isir ahaan u gu tirada badan ee loo yaqaan Angalo-Saxon, oo ah dadka asal ahaan ka soo jeeda Ingiriis, Jarmal, Holland iyo Iskaandinaafiyan. Waa dad isku asal ah isla markaa wada haysta mad'habta Borotestaan. Haddaba waxaa dhacday dadkii in tiradoodii hoos u dhacday, halka ay bateen quruumaha ka la isirka ah: Afrikaan, Laatiin, Yuhuud, Muslin, Aasiyaan, ama caddaanba ha ahaadeene haysta aragtiyaha Liberal, Bidix iyo diinlaawannimo. Dadyowgaas oo dhami kolkii ay is gaashaanbuursadeen wax ay noqdeen awood codka doorashada u babacdhigta qoladii hore. Bal ogow oo Maraykanka weligii nin aan qoladaa ahayni madaxweyne ka ma noqon Obama mooyee, madaxweyne caddaan ah oo aan Borotestaan ahaynna waxaa la arkay Kennedy oo la dilay iyo kan imika la doortay.
Xaaladdani haddaba caddaankii wax ay ku ridday cabsi iyo in ay mustaqbalkooda ka welwelaan. Asalkaba sababta Donald Trump u soo baxay waa taas. Tusaale ahaan doorashadii sannadkan oo ay labada qolo aad isu arkeen si ciddiyo ku dirir ah baa loo ololeeyay loona codeeyay, waxaana galay dadkii u gu badnaa abid Maraykanka, labada qolaba. Joe Biden waxaa u codeeyay ku dhowaad 79 milyan oo qof, halka ay Trump u codeeyeen in ka badan 73 milyan oo qof. Labadooduba sidaa wax ay ku heleen tiro aan weligeed murashax Maraykan ahi helin.
Caddaanka dhaqanraaca ah ee Borotestaanka ahi wax ay u arkaan in dalkoodii gacantooda ka sii baxayo oo quruumo is gaashaanbuursaday ka la wareegayaan. Waa halka ay ka timid Trump goor walba in uu weeraro warbaahinta, shirkadaha, aqoonyahanka iyo dhammaan quwadaha u dhexeeya dawladda iyo dadweynaha, kuwaas oo uu u arko in ay qolada kale u adeegayaan.
Shisheeye iyo sokeeyaba waxaa loo badan yahay in casrigii Maraykanku dhammaaday oo hoggaanka dunida Shiine la wareegayo, qarniganina yahay kiisii haddii qarnigii tagay ahaa kii Maraykanka. Taas baa Maraykanka ku furtay fadqalallo iyo fawdo siyaasadeed iyo bulsheed oo dhabqisay habkii iyo habsamidii sooyaalka ahayd. Asalkaba taas baa keentay in qof Trump oo kale ahi madaxweyne noqdo, kaas oo u dhaqmaya sida dunida dawlad baradka ah la gu yaqaan. Isaguna tallaabooyin badan oo fadeexad iyo qawaanaan u eg buu qaaday oo dunida ku la dhaqmay si uu quwadda Maraykanka u badbaadiyo culayska Shiinahana u dhimo. Wax ay se khubarado arkaan in aan xaqiiqadii waxba iska doorin.
Si walba, waxaa muuqata in Maraykanka cadceeddiisii galbatay, waxa dhacaya oo dhamina ay salka ku hayaan burbur hoosta ka ga socda. Dagaal sokeeye haddii ay ka badbaadaan ayay nasiib lee yihiin.
Maxay Qaramada Midoobay Ka Tidhi Dilka Muxsin Oo Horseedi Kara Dagaal Ka Qarxa Bariga Dhexe?
Maxkamad Diiday Racfaan Uu gudbiyey Madaxweyne Trump.
Trump Oo Aqbalay Bilaabidda Marxaladdii Xilka Kula Wareegi Lahaa Biden.
Halkuu Ka Baxay Madaxwayne Trump-kii Jeclaa Inuu Fagaarayasha Ka Hadlo ?
[Akhriso:-] Waa Maxay Sababta Xilka Looga Qaaday Wasiirkii Arrimaha Dibadda Ee Soomaaliya?